SAWIRRO: Wasaaradda Haweenka & Horumarinta Qoyska oo xustay Maalinta caalamiga ah ee Gabdhaha Aduunka – PUNTLANDTIMES- KA DHIGO ISHA WARARKA EE CAALAMKA & SOMALIA
Home 2017 October Wararka Maanta SAWIRRO: Wasaaradda Haweenka & Horumarinta Qoyska oo xustay Maalinta caalamiga ah ee Gabdhaha Aduunka
SAWIRRO: Wasaaradda Haweenka & Horumarinta Qoyska oo xustay Maalinta caalamiga ah ee Gabdhaha Aduunka
GAROOWE(P-TIMES) – Wasaaradda Haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda Puntland ayaa xustay maalinta caalamiga ah ee gabadhaha Adduunka, waxaana munaasabad lagu weynayo lagu qabtay magaalada Garoowe.
Xaflad ka dhacday xarunta wasaaradda ayaa lagu waynayey maalintan oo sanadkiiba mar caalamka laga xuso, waxana lagu dhiiri-geliyaa horumarrada gabdhaha dunida.
Ahmiyadda maalintan waa in hablaha da’yarta ah loo bidhaamiyo daariiqa horumarka iyo sida ay door ugu yeelan karaan koboca bulsho iyo qoys ee dalkooda, waxana wasaaradda oo muujinaysa kaalinta muhiimka ah ee habluhu qabatay xafladdan oo ayku casuntay gabdho da’yar ah oo isugu jira arday, kuwo shaqeeya iyo qaar ciyaara kubadda kolayga.
Wasiirku xigeenka wasaaradda Haweenka iyo arrimaha qoyska ayaa sharaxday ahmiyadda maalintan iyo muhiimadda ay u leedahay hablaha waddanka.
Xubno ka socday Hay’adaha taageera horumarinta gabdhaha ku nool deegaannada Puntland ayaa goobta ka sheegay doorkooda xafladdan iyo howlaha garab istaagga gabdhaha ah ee ay wadaan.
Tababarihii hore ee xulka qaranka gabdhaha Soomaaliyeed, Cabdulqaadir Khaliif oo halkan joogay ayaa ammaan u jeediyey kaalinta gabdhaha Soomaaliyeed ee horumarinta dalka, isagoo ku baaqay inla dhiiri-geliyo gabdhaha ciyaara kubadda gacanta ee qaarkood xafladdan joogay.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland, Abshir Aw Yuusuf Ciise wuxuu ku dhiiri-geliyey gabdhaha da’yarta xoojinta waxbarashada oo uu sheegay iney tahay waxaa dhabaha u xaari kara iney saamayn bulshada ku dhex yeeshaan.
Ugu danbayntii Koob iyo iyo bilado ayaa goobta lagu guddoonsiiyey kooxo gabdha ah oo ku tartamay kubadda gacanta.